लकडाउन भित्र ‘लकडाउन’ को अध्ययन गर्दा – Quick Khabar
Loading... आजः २ असार २०७८, बुधबार । Wednesday 16th June 2021
देशभर थप २,८२८ जनामा कोरोना संक्रमण, ५२ संक्रमितको मृत्यु
कोरिया र जापानबाट अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन मेसिन हस्तान्तरण
कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्यायो ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाखको बजेट (बजेटको पूर्णपाठ सहित)
थप २,७४५ जनामा कोरोना संक्रमण
कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आ.व. को बजेट भाषण (प्रत्यक्ष प्रशारण)
सदन संचालनमा सहयोग गर्छौः एमाले नेता कँडेल
एसओएसद्वारा स्वास्थ्य उपकरण सहयोग
देशभर थप २,९१८ जनामा कोरोना संक्रमण, ५३ संक्रमितको मृत्यु
लकडाउन भित्र ‘लकडाउन’ को अध्ययन गर्दा
खगेन्द्र अधिकारी ‘अमृत’
२०७८ बैशाख २४, शुक्रबार ११:५० मा प्रकाशित
सञ्चार माध्यमहरुमा कता–कता सुनिन थाल्यो चीनमा एउटा सूक्ष्म भाइरसको उत्पती भयो भनेर । चीनले उक्त भाइरसलाई नियन्त्रण गरेर सिध्याउनेछ भन्ने विश्वास गर्दा गर्दै चीनबाटै फैलिन सुरु ग¥यो उक्त भाइरसले । कोभिड–१९ नाम दिइएको त्यो भाइरस यसरी फैलियो कि त्यसलाई रोक्नका लागि विश्व हायल–कायल भएको छ । विश्वमा ३२ लाख ६९ हजार भन्दा बढी मानिसहरुको मृत्युको कारण कोरोना बनिरहेको बेलामा नेपालमा पनि कोरोनाको संक्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्नका लागि हम्मेहम्मे परिरहेको छ । २०७६ सालको चैत्रको दोस्रो हप्तामा कोरोनाको संक्रमण दर फैलिन नदिनका लागि सरकारले बन्दाबन्दी अर्थात् लकडाउन ग¥यो । सुरुका दिनमा निकै त्रसित बनाएको यो भाइरस आज एक वर्षपछि प्रायः सबै नेपालीहरुका छरछिमेकमै पुगिसकेको छ । त्यही लकडाउनलाई आफ्नो कृतिको नामाकरण गरेर कोहलपुरका साहित्यकार सागर गैरेले प्रकाशित गरेको कृति ‘लकडाउन’ मैले अहिले भईरहेको लकडाउनमा अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गरे ।
मैले भन्ने गरेको छु, लेख्ने गरेको छु कुनैपनि कृति पढेपछि त्यसको बारेमा तब खेल्न मन लाग्छ जब मलाई त्यो कृतिले छुनसक्छ । मेरो मनलाई पगाल्न सक्छ र म पग्लिन सक्नुपर्छ । विधा जुनसुकै भएपनि त्यसमा संग्रहित शब्दहरु, त्यसको भाव, सिर्जनशैली, संरचना र पाठकलाई दिन खोजेको सन्देशबाट पग्लिन सकिएन भने केवल लेख्नका लागि मात्र किन समय र मसीको बर्बादी गर्नु जस्तै लाग्छ । त्यसैले आज फेरी एकपटक म सागर गैरेको कृति ‘लकडाउन’ सँग पग्लिएको छु र मलाई त्यसले पलागेको छ । त्यसैले यी शब्दहरु मेरा पाठकहरु समक्ष पु¥याउने कोसिस गरेको छु ।
म कसैको कृतिको बारेमा आलोचना वा समालोचन गर्दिन । अझ भन्ने हो भने आलोचना र समालोचना गर्न सक्दिन वा गर्नै जान्दिन । किनकी लेखकले कुन प्रसंगमा कुन उद्देश्यका साथ आफ्ना रचनाको प्रष्फुटन गर्छन् पाठकले त्यही ढंगले बुझिदिनु पर्छ भन्ने छैन । लेखकले एउटा कल्पना गरेर, यथार्थलाई भोगेर लेखेको कुरालाई पाठकले पनि त्यही कल्पना गर्नु वा भोग्नु सम्भव छैन । त्यसैले पाठक स्वतन्त्र हुनुपर्छ । कुनैपनि विधाको कुनैपनि लेखकको कुनैपनि कृतिलाई पाठकले आफ्नो ढंगले अध्ययन गर्नुपर्छ र त्यसको अर्थ संरचनागत रुपमा नबिग्रने गरी लगाउने अधिकार पाठक नै हुन्छ । सागरजीको ‘लकडाउन’ पनि मैले आफ्नै ढंगले अध्ययन गरे । त्यसकारण यहाँ लेखकले कस्ता शब्दको प्रयोग गर्नुभयो ? यसको बोक्रो कस्तो निर्माण भयो ? यसमा छापिएका अक्षरहरु साना छन् या ठूला छन् ? किताबको आकार मोटो छ या पातलो छ ? त्यतातिर म जानै चाहान्न । लेखकलाई आफ्नो कृति कस्तो रुप रंगको बनाउने स्वतन्त्र अधिकार हुने भएकाले नै उहाँलाई जस्तो उचित लाग्यो त्यस्तै बनाउनु भयो । त्यो कुरामा म धेरै जान्ने हुन आवश्यक नै ठान्दिन । वर्तमान समयमा व्यापारलाई मूल पेशा बनाएको भएपनि पत्रकारिता क्षेत्रमा आफ्नो दख्खलता दर्ज गराउन सफल सागरजीको लेखनशैली र शब्द संरचनाले पाठकको मन जित्ने कुरामा शंकै छैन मलाई ।
यति भनिरहँदा अब म के का बारेमा लेख्न खोज्दैछु त ? मेरा पाठकहरुको मनमा लाग्ने प्रश्न यही होला । अघिल्लो वर्षको लकडाउन समाप्त भएपछि केही तङ्रिन थालेको अर्थतन्त्र, केही सुस्ताउन थालेको साहित्य क्षेत्र र अलिकति आनन्दले सास फेर्न थालेको आम जनमानसलाई दोस्रो लहरको रुपमा आएको कोरोनाले फेरी सास फेर्न अप्ठ्यारो पारिदिएको छ । त्यही अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गर्दै घर भित्र बसेर आफूपनि बाँच्नु पर्ने र आफ्नालाई पनि बचाउनु पर्ने स्थितिमा मैले ‘लकडाउन’ को फाइदा उठाउने योजना बनाए । त्यसकारण आफूले भोगेको लकडाउन भित्र सागरजीले लेखिदिएको ‘लकडाउन’ लाई अध्ययन गरें । मैले भोगेको लकडाउन भित्र सागरजीले लेखेको ‘लकडाउन’को गुदी केलाउने कोसिस भने अवश्य गरेको छु ।
‘लकडाउन’ भित्र लघु निबन्धहरु छन् । म यी निबन्धहरुलाई किन लघु भनिरहेको छु भने यी निबन्धहरु पढ्दा पाठकको प्यास मेटिदैन । मलाई लाग्यो लेखकले किन यति छोटा निबन्धहरु लेख्नुभएको होला । अलि लामा बनाएको भए । अझै त्यो कथा लम्बिएको भए । अझै तन्किएको भए । पढ्दा पढ्दै मन तृप्त हुने भएको भए । अब के हुन्छ होला कहाँ गएर यस कथाले अन्तिम रुप धारणा गर्ला भन्ने लाग्दालाग्दै निबन्धको अन्त्य हुन्छ र अन्तमा गएर शीर्षकलाई पूर्ण बनाईदिन्छ । शीर्षकलाई पूर्ण बनाउन नसकेको भए यी निबन्धहरु कमजोर हुने थिए होला । शीर्षकको पूर्णतासँगै उठान भएको विषयवस्तुको अन्त्य गर्ने कलात्मक शैलीले पनि भोग्नु परेको लकडाउन जतिसुकै कष्टकर भएपनि पढ्न पाइएको ‘लकडाउन’ सुन्दर लागेको छ ।
पाल्पामा जन्मेर बर्दियामा हुर्केर बाँकेमा बसेर सागरजीले ‘लकडाउन’ लेख्नुभयो । म पनि दैलेखमा जन्मेर आधा बाल्यकाल आधा दैलेख र आधा सुर्खेतमा बिताएर पुनः सुर्खेतमै बसेर ‘लकडाउन’ पढ्ने अवसर प्राप्त गरे । उहाँले कोहलपुर चौराहाको बारेमा लेख्नुभएको छ । उक्त निबन्धमा उहाँले जुन कुरा भोग्नु भएको छ मैले पनि भोगेको छु । दैलेखको देवकोटा चोक र सुर्खेतको वीरेन्द्रचोक देखेको म । कोहलपुर चौराहामा पुग्दा त्यहाँ कसको शालिक होला भनेर खुल्दुली लागेकै हो मलाईपनि । जब मेरा आँखाले त्यहाँ कसैको शालिक देखेनन् त्यसपछि मलाई पनि त्यो चोक जस्तै लाग्दै लागेन । सायद त्यसैले होला कोहलपुर चोक भन्दा पनि चौराहाको रुपमा बढि परिचित भएको ।
एस.एल.सी. परीक्षाको नतिजा सागरजीले ५ रुपैयाँ तिरेर हेर्नुभएको रहेछ । तर मैले १० रुपैयाँ तिरेर दैलेखको देवकोटा चोकमा हेरेको थिएँ । परीक्षामा पास भएको खुसीयाली बाँड्न उहाँ दिदीको घरतिर जानुभएछ म आफ्नै घरतिर गएको थिएँ । स्थानीयस्तरको प्रकृतिको वर्णनलाई खुलेर गर्न सक्नुले पनि कोहलपुरको पिपल चौतारीको खोजी हुनसक्छ । दैलेखको भगवती प्रा.वि. तुर्सुमा अध्ययन गरेको मान्छे म । त्यहाँ एउटा ठूलो तिजुको रुख थियो । विद्यालयको भवन भत्केको कारण त्यही रुखले हामी विद्यार्थी र हाम्रा गुरुहरुलाई घामबाट बचाउन सहयोग गरेको थियो भने एक तर्को पानी पनि छेकिदिन्थ्यो । ठूलै पानी पर्ने सम्भावना भएमा हाम्रो विदा हुन्थ्यो घर जान पाइन्थ्यो । पढ्नै नपर्ने क्या मज्जा लाग्थ्यो । विद्यालयको घर बनाउने नाममा काटियो तिजुको रुख । त्यो तिजुको रुखको शितलतामा बसेर प्राथामिक तहको शिक्षा आर्जन गरेकाहरु एकपटक इतिहासको मलाम गएका थियौ । सकिएको थियो तुर्सुको इतिहास । त्यस्तै भएछ कोहलपुरको पिपल चौतारापनि ।
सागरजी त्यता मात्र होइन यताको अवस्थामा पनि त्यस्तै छ । त्यहाँ विकास गर्ने नाममा विभिन्न पूराना संरचना अनि इतिहासहरु मेटाउने कार्य भइरहेको छ भने यहाँ पनि आधुनिकताका नाममा संस्कृति र सभ्यतालाई समाप्त पार्ने खेल चलिरहेको छ । पछिल्लो समयमा विकासको गतिलाई तिब्र बनाउने नाममा इतिहास मेट्ने कार्यमा सक्रिय छौ हामी नेपालीहरु । सुर्खेतको कुरा गर्ने हो भने हिजो पूर्खाहरुले आवश्यकताका आधारमा राखिदिएका जग्गाहरु आज व्यक्ति – व्यक्तिका नाममा गर्न थालिएको छ । बाटोको चौडाइँ बढाउने नाममा यहाँका पनि धेरै पिपल चौतारीहरु मासिएका छन् ।
तर तपाईंले भने झँै पूर्वजको नाममा चौतारी बनाउनेहरु छैनन् यहाँ । वर–पिपल र स्वामीका रुख रोप्नेहरु भन्दा भएकाहरु पनि उखेल्नेहरु छन् यहाँ । आमा बाबु मर्दा १३ दिने काजक्रिया गर्न अप्ठ्यारो मान्नेहरुले ‘लकडाउन’ मा उल्लेख भएजस्तै ‘बुढ्यौलीमा ती चौतारी हामी आफैँलाई काम आउनेछन्’ भनेर सोच्नै सकेका छैनन् ।
‘बाटो’ शीर्षकको निबन्धमा लेखकले उल्लेख गर्नुभएको छ, ‘जहाँ बाटो छ त्यहाँ जीवन छ ।’ खै हजुर, हजुरको जस्तै यस्तै कुरा सोचेर होला अहिले ठाउँ–ठाउँमा, गाउँ–गाउँमा, वडा–वडामा डोजरले बाटो निर्माण गर्ने क्रम तिब्र छ । अनि डोजरले मच्चाएको आतंकको कारण त्यहाँका मान्छेले जीवन पाउन होइन बरु जीवन गुमाउनु पर्ने अवस्थाको श्रृजना भएको छ । पहिरोले जीवन खोसिदिने गरेको छ । खुसी लुटिदिने गरेको छ । मलाई लाग्छ तिनीहरुले जिन्दगीको सही बाटो चिन्नै सकेनन् सही बाटो चिन्न सकेको भए त जिन्दगी पनि चिन्दा हुन् । मान्छेको जीवनमा अनेकथरी बाटाहरु आउँछन् । ती बाटाहरु केवल यात्राका सहयात्री मात्र बन्छन् अनि छोडिन्छन् जहाँको त्यही । तिनै दोबाटाहरुमा हिड्ने क्रममा आज लकडाउन भोग्दै गर्दा ‘लकडाउन’ पढ्ने मौका मिलेको हो मलाई पनि ।
बाल्यावस्था होस् कि युवा अवस्था होस् । प्रायः सबैको एउटै खालको हुँदोरहेछ भन्ने कुरा मैले ‘लकडाउन’ अध्ययन गरेपछि पो बुझे । पाल्पामा जन्मेको होस् कि दैलेखमा । पोखरामा जन्मिएको होस् कि दार्चुलामा । हामी नेपालीहरुको बाल्यावस्था उस्तै उस्तै हुँदोरहेछ । सागर र सागरहरुले सुगाको खोजी गरे झैँ हामीपनि जुरेलीको खोजी गथ्र्यो । सागरजीले गोठालो जाँदा गुच्चा खेलेको सम्झनु भएको छ मैले गोठालो जाँदा कमेजका टाँक काटेर खोपी खेलेको सम्झन्छु । सागरसँग कृष्ण, शिव, गणेश साथी रहेछन् मसँग कर्ण, भीम, मायाराम, निर्मल, नवराज साथी थिए ।
भनिन्छ, भाइ भनेको भाइ हो । सागरजीले भाइको हाँत भाँचिएको कुरालाई अहिलेसम्म पीर गरिरहनु भएकोरहेछ । तर यहाँ अलिकति फरक छ मेरो हात भाँचिदा मेरो भाइ अञ्जान थियो तर भरखरै भरखरै सुर्खेत झरेको बेलामा मलाई भएको टाइफाइट अनि मेरो भाइ पूर्ण साइकल चलाउन नजान्ने तर डो¥याउन सक्ने । म रोगले फतक्क गलेको हिड्नै नसक्ने । उसले साइकलको पछाडि राखेर डो¥याउँदै थापा मेडिकलमा लगेर सुइँ लगाइ घरमा पु¥याएको कुरालाई म पनि कहाँ बिर्सन सक्छु र ?
नामाकरण शीर्षकको अध्ययन गरिरहँदा म सागर गैरेद्वारा लिखित ‘लकडाउन’ पढिरहेको छु वा हिमलालद्वारा लिखित । म द्विविधामा परे एकपटक । अनि लाग्यो आफ्नो नामाकरण आफै गर्ने महान कार्यपनि त सागरजी ले आफै गर्नुभएछ । हो, म पनि आफ्नो नामको पछाडि ‘अमृत’ लेख्ने गर्छु । म प्राथामिक विद्यालयमा पढ्दै गर्दा हाम्रो एक जना गुरु हुनुहुन्थ्यो गंगा सिंह ठकुरी । उहाँले प्रायः विद्यार्थीहरुको आचरण अनुसार नामाकरण गनुर््भएको थियो । ठूलो गाला भएको भयो भने ग्वाम्चो, लामो नाक भएको भयो भने नाक्चे, धेरै ट्याउँ ट्याउँ गर्ने भयो भने टुर्रो । बोल्दा पनि खल्लो तरिकाले बोल्नेलाई गल्लो । सधैँ पखाला लागेको छ विरामी छु भनेर गृहकार्य नगर्नेलाई छेरुवा जस्ता टेकनामहरु थिए । साथी साथीमा जिस्किदा अहिले पनि हामी ती नामहरु उच्चारण गर्छौ र बाल्यकाललाई सम्झन्छौ । म शिक्षकको छोरा भएकोले विद्यालयमा मैले गरेको गतिविधिहरु मेरो बुबाले मूल्याङ्कन गरिराख्ने भएकोले बेलुका घरमा समेत हप्कीदप्की खानुपर्ने भएकोले पनि म सोझो थिएँ । जसको कारण पनि मैले गंगा सिंह गुरुबाट ‘अमृत’ नाम पाउन सफल भएँ । त्यसैले त्यो नामलाई साहित्यिक रुपमा जोडिदिएको हुँ । तर सागरजी जस्तो पूरै नाम फेर्ने हिम्मत भने गरिन मैले ।
‘लकडाउन’ भित्र भएका निबन्धहरु एक पढ्यो अर्को पढौं पढौं लाग्ने खालका छन् । या त ती निबन्धहरुले मेरो जीवनसँग सत्प्रतिशत मेल खाएकोले मलाई त्यसो लागेको हो या सबैलाई यस्तै लागेको छ । म दंग छु । ‘असारे झरी’ पर्दै गर्दा असारमा झिजेको अनि खेतमा रोपाईं गरेको अनि हिलो छ्यापाछ्याप गरेको मात्र होइन ठूलो सन्देश त के भने ‘कृषक बलिया भए देश बलियो हुन्छ’ भन्ने जुन वाक्य छ त्यसको अनुशरण वर्तमानमा पनि गर्न जरुरी छ । कृषि प्रधान देश भनेर नारा लगाएर मात्र हुँदैन । त्यसका लागि आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास गरेर खाद्यन्नको आयातदेखि स्वरोजगारी समेतमा बढावा दिन सकिन्छ भन्ने कुराको सिकाइ गर्न जरुरी छ । पढ्दै जाने क्रममा ‘बाकस’ पढें । एउटा बालक त्यो पनि आफ्ना खत्रयाङ् खुत्रुङ् जम्मा गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको । अनि उसलाई आफ्नो सम्पत्तिको रुपमा रहेको तिनै खत्रयाङ् खुत्रुङ्लाई सुरक्षित राख्ने कत्रो हुटहुटी हुन्छ भन्ने कुराको यथार्थ चित्रण ‘बाकस’ मा छ । सागरजीले उहिल्यै बाकस पाइसक्नु भएछ तर मैले अहिलेसम्म बाकसको जोहो गर्न सकेको छैन । त्यसैले त मेरा आफ्ना कमाई प्रमाण पत्रहरु प्लाष्टिक भित्र पोको पारेर राखेको छु भने लुगा लत्ताहरु छरपष्ट हुन्छन् कोठाभरी ।
‘लकडाउन’ भित्र केवल देखाइ र भोगाई मात्र समेटिएको छैन । देशभक्ति, मातृभूमि प्रतिको माया र मोहलाई पनि एउटा सुन्दर युवतीले आँखामा गाजल लगाए जसरी व्याख्या गरिएको छ । विशेष गरी दक्षिणी सीमामा अवस्थित भारतले नेपाली भूमी माथि गरेको आक्रमणका विरुद्धमा तिखो ढंगबाट प्रहार गरिएको छ । अनि राष्ट्रियताका नाममा शासन र भाषण गर्ने हाम्रा नेताहरुलाई हानिएको छ गतिलो झापड पनि । सत्ताशीन हुँदा केवल आफन्त र आफ्नो दल तथा आफूमा केन्द्रित रहनेहरु प्रतिपक्षमा हुँदा राष्ट्रवादको चर्को नारा लगाएर जनता झुक्याउने कोसिस गर्छन् । ‘लकडाउन’ ले बोलेको छ इतिहासलाई पनि । हिजोका दिनमा भारतले व्यहोर्नु परेको दासत्व र उहिलेदेखि अहिलेसम्म नेपालले सानका साथ जोगाइराखेको स्वतन्त्रताको कुरा । ‘लकडाउन’ ले उठाएको छ लिपुलेकका कुरा, लिम्पियाधुराका कुरा अनि चुच्चे नक्साका कुरा । अर्काले जोडिदिएको, अर्काले बनाईदिएको भारत जस्तो होइन नेपाल । नेपाल त हाम्रा पूर्खाले आज्र्याको हो ।
प्रकृतिले कहिले काँही लेखकहरुलाई झुटो सावित गर्ने कोसिस गर्दोरहेछ । लकडाउनमा लेखिएको छ, ‘वसन्त लिएर कुहुकुहु गर्दै कोइली आउँथ्यो । कोइलीसँगै आउँथ्यो काफल पाक्यो चरो पनि ।’ तर यसपालि लालीगुराँसले फूल्न कञ्जुस्याँई गरे । काफल पाक्न कञ्जुस्याँई गरिरहेका छन् । भित्री मधेशमा पाइने थाकल (खजुरी) त आगलागीसँगै कता हराए हराए । लेखकले पन्छी प्रेमलाई पाठकको मनमा भिज्ने गरी उल्लेख गर्नुले पनि एकपटक सबैले आफ्नो बाल्यकाल सम्झन बाध्य हुनुपर्छ ‘लकडाउन’ पढ्दै गर्दा । ‘कति–कति बेला लकडाउन निकै बोझिलो लाग्दछ । महिनौंदेखि घरभित्र बन्द भएर बस्नु पर्दा उकुसमुकुस हुन्छु । यो क्रम अझै कति समय लम्बिने होला ?’ त्यो त कोरोनाको खोप निर्माणकर्ताहरुलाई पनि थाह छैन । म पनि त्यसै गरी अत्यासमा परेको छु । फेर्छु लामो सास र भन्छु, ‘यो क्रम अझै कति समय लम्बिने होला ?’ लकडाउनको समयमा कालोबजारी, भ्रष्टाचारीहरुको बाहुल्यता बढिरहेको छ । दिनभर काम गर्ने र साँझ विहान छाकको जोहो गर्नेहरु समस्यामा परेका छन् ।
पुराना तरिका र प्रवृत्ति तथा प्रविधिको बारेमा समेत लेखकले नयाँ पुस्तालाई इतिहास दिन खोज्नु यस कृतिको अर्को सार्थकता हो । आज हामी जति नै अर्गानिकताको कुरा गरेपनि हिजोका दिनमा बारीका काल्नामा खाल्डोमा परालले बेरेर पकाएको केरा र आजको केमिकलले एकरातमै पाकेका केरामा फरक छ । लकडाउनले मान्छे आफ्नै सिमानाभित्र बन्द भएर बस्दै गर्दा एकातिर प्रकृति भने शान्त भएको छ । वातावरण स्वच्छ भएको छ । चरादेखि मृगसम्म जंगलमा रमाउनेहरु निर्वाध रुपमा ओहोरदोहोर गर्न पाएका छन् । यो हामीले सिक्नुपर्ने पाठ हो । हामी शान्त बनिदिँदा प्रकृति रमाउँछ वातारण हाम्रै अनुकूल बनिदिने रहेछ ।
पृथ्वीको एउटा कुनामा उत्पन्न भएको कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट मान्छे अत्तालिएको छ । दोस्रो लहरसँगै कोरोना झन कठिन भएर आइरहेको छ । कोरोनाका बारेमा जति बुझ्ने कोसिस भइरहेको छ मानिस उति नै निरीह र दुःखी बनिरहेको छ । लेखकले भन्नुभएको छ, ‘कोरोना प्राकृतिक विपत्तिको एउटा सङ्केत मात्रै हो । यो भन्दा पनि भयानक विपत्तिहरु नआउलान् भन्न सकिँदैन ।’ त्यसकारण मानवजातीले प्राकृतिक रुपमा बरदान स्वरुप प्राप्त गरेका वन, जंगल, नदीनाला, हिमाल, समुद्र वायूमण्डलको बारेमा गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ । कोरोनाका कारण लकडाउन र लकडाउनका कारण प्रभावित भएको शिक्षा क्षेत्रमा बारेमा समेत ‘लकडाउन’ भित्र स्पष्ट पारिएको छ भने सामाजिक सञ्जालले दिएको सहजता र असहजताका बारेमा मात्र होइन यसको सही प्रयोगको बारेमा सन्देश प्रवाह भएको छ । सामाजिक सञ्जालबाटै गाली गर्नेलाई आफूले पनि केही गालीहरु सुरक्षित राखेको उल्लेख गरेर लेखकले आफूभित्र पनि मानवीय स्वभाव अलिकति रिस भएको कुरालाई दर्शाउनु भएको छ ।
हो, वास्तवमा यो कोरोनाले विश्वलाई अत्यास पारिसकेको छ । यो अत्यासको घडी कहिले सकिन्छ त्यो त थाह छैन । कहिले खुल्ला लकडाउन ? लकडाउन खुलेपछि कस्तो होला ? खोरमा थुनिएका कुखुराहरु एकैपटक बाहिर आउन पाउँदा कसरी खुसी हुँदै उफ्रिन्छन् मान्छेपनि त्यस्तै खुसी हँुदै उफ्रिन्छन् होला । एउटा सहज अनुमान गरेर लेखकले निबन्धका माध्यमबाट आफ्नो मात्र होइन दुनियाँकै भोगाई प्रस्तुतिकरणले पाठकको मन छुन सफल भएको छ । कहिले असारमा पनि पानी पर्दैन । कहिले वैशाखमै पानी दर्किन्छ । समय बलवान छ । प्रकृति महान छ । त्यो भन्दा पनि महान छ लेखकको लेखनशैली । लकडाउनअघि र लकडाउनपछि शीर्षकमा हिजोको अवस्था र भोलीको अवस्थालाई चित्रण गरिएको छ ।
हाम्रो समाजमा भएका विकृति र विसंगतिका विरुद्धमा लेखकले रुकुममा भएको घटनाको उजागर गर्नुभएको छ । २१ औं शताब्दीमा समेत जातीयताका कुरा गरेर गरिने विभेद र एकले अर्कालाई गर्ने हेपाहा प्रवृत्तिले समाजको अपनत्व र भातृत्वको रक्षा गर्न सक्दैन ।
एकचालिस वटा निबन्धहरु संग्रहित यस कृतिमा लेखकले आफ्नो विगत वर्तमानदेखि इतिहास, प्रकृति, वातावरण, समाज, शहर र गाउँ, अनि आफ्नो भोगाईको समेत उल्लेख गर्नुले यो बहुमुखी विषयवस्तु समेट्न सक्नुले पनि यसले सफलता प्राप्त गर्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । आख्यानकार नयनराज पाण्डेले सटिक भूमिका बाध्नुभएको यो कृति हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानले प्रकाशित गरेको छ । प्रकाशक संस्थाका तत्कालिन अध्यक्ष महानन्द ढकालले आफ्नो प्रकाशकीयमा भन्नुभएको छ, ‘लकडाउन भुइँमान्छेहरुको कथा हो । आवाज विहीनहरुको आवाज हो । कतै न कतै कुनै न कुनै माध्यमबाट सबैले प्राप्त गरेको अनुभव र अनुभूति हो ।’
पाठकले पढिरहँदा त्यो आफ्नै कथा अझ भनौ आफ्नै भोगाई हो भन्ने लाग्न थालेपछि एकातिर पाठक पनि सफल अर्कोतिर लेखक पनि सफल । त्यसैले म सागरजीको सफल पाठक बन्न सकेको जस्तो लागिरहेको छ भने उहाँ मेरा लागि सफल लेखक हो । यस्ता अन्य कृतिहरुको बारेमा लेख्न सक्ने अवस्था रहला नरहला तर पढ्न पाइयोस् । सागरजीले फुल्टिन निबन्धमा लेख्नुभएको छ, ‘मेरो कलम कहिल्यै नहारोस्’ म पनि भन्छु सागरजी तपाईंको कलम कहिल्यै नहारोस् । लेखन यात्रा सफलताको शुभकामना ।